Torohevitra manan-danja 11 Raha tsapanao fa tsy mandeha na aiza na aiza ny fiainanao - Blog
Mahatsapa ve fa tsy mandeha mankaiza ny fiainanao?
Toa miasa fotsiny ve ianao, misakafo, matory, mamerina?
Leo ny monotony ve ianao?
Tsy irery ianao. Saika ny olona rehetra dia mahatsapa toy izany amin'ny fotoana sasany tafahitsoka ao anaty fahasamihafana sy tsy firaikana.
Nefa manana izany ao aminao ny manova izany. Afaka mahita làlana vaovao amin'ny fiainana ianao ary mandray azy.
Izao no fomba.
1. Mankasitraka ny halaviran'ny vitanao.
Ny dingana voalohany amin'ny fanoherana ny eritreritra hoe tsy mandeha na aiza na aiza ny fiainanao dia ny fahatsapana ny halaviranao.
Avereno jerena ny lasa - fa tsy ny lasa akaiky fotsiny, fa ny taona lasa - ary ho hitanao fa ny fiainana itondranao izao dia tsy mitovy amin'ny taloha.
Ny fehin-kevitra tokana azonao raisina dia ny fiainanao tsy nijanona tampoka, nijanona ary tsy niova. Handeha ho any ianao. Mivoatra ianao, miova, mitombo.
Na dia mahatsapa ho miverimberina aza ny fiainanao izao dia tsy ho toy izany mandrakizay.
Hitanao fa ny fiainana dia mazàna andianà vanim-potoana maharitra maharitra izay manamarina matetika matetika amin'ny vanim-potoana fohy kokoa ny fiovana.
Amin'ny maha zaza anao dia mandeha mianatra ianao mandritra ny taona maro raha tsy hijanona tampoka izany tsy tapaka. Azonao atao ny mianatra any amin'ny oniversite sy any amin'ny oniversite izay misy samy hafa be, na mitodika mankany amin'ny tontolon'ny asa izay mbola tsy itovizan'ny fiainana ianao.
Mety hijanona mandritra ny fotoana maharitra amin'ny asa iray ianao, saingy azo inoana kokoa fa hanana asa maromaro ianao mandritra ny taona maro. Ireo fiovana eo amin'ny toerana sy / na ny orinasa dia tonga eo anelanelan'ny vanim-potoana izay tsy misy zavatra mitranga firy amin'ny fiainanao miasa.
ny fomba hisafidianana zazalahy roa
Avy eo koa ny olana momba ny fitiavana, ny tantaram-pitiavana ary ny fianakaviana. Mpiara-miasa vaovao, fifandraisana lava, vanim-potoana maha mpitovo, manambady, miara-miasa, manan-janaka… ireo rehetra ireo no famantarana fa handeha ho any amin'ny toerana hafa ny fiainanao.
Izany dia afaka mandalo taona maro tsy misy ireo fanovana lehibe natao. Avy eo dia mety hahatsapa ianao fa tsy mandeha mankaiza ny fiainanao.
2. Anontanio hoe inona no tianao hitoviana amin'ny fiainanao.
Ankehitriny rehefa niherika ny lasa ianao, dia atodiho any amin'ny ho avy ny sainao ary alao sary an-tsaina ny fiainana iray izay hahasambatra anao sy ho afa-po amin'ny ankapobeny.
Aiza ianao? Iza no miaraka aminao? Inona no asa anananao? Inona no laninao amin'ny fotoananao? Inona no laninao amin'ny volanao?
Angamba mipetraka amin'ny tanàna lehibe ianao, miaraka amin'ny mpiara-miasa maharitra, miasa asa tianao ianao, mandany faran'ny herinandro ianao amin'ny filalaovana fanatanjahantena na milentika amin'ny zavakanto sy kolontsaina, manangona vola ianao mba handehananao amin'ny vakansy sy fitsangatsanganana mahazatra.
Na mety tsy hitovy ny fiainanao tonga lafatra.
Mipetraha ary mieritrereta tsara momba ny fiainana mialoha anao. Inona no itiavanao azy?
Fa aza latsaka ao anaty fandriky ny fakana sary ny zavatra heverinao fa tokony ho toa ny fiainana mifototra amin'ny andrasan'ny hafa na ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny. Raha te-hanao zavatra tsy mitovy amin'ny 'norme' ianao dia ataovy - io no fiainanao rahateo.
Ary aza mieritreritra fa tsy afaka manova an'ity vinavinan'ny hoavinao ity ianao raha manohy mamorona làlana amin'ny fiainanao. Tsy misy na inona na inona hitovy izao - tsy izao tontolo izao, tsy ny toekarena, tsy ianao, tsy ny fanirianao sy ny fanirianao.
Mijanona ho malefaka ary halala-tsaina amin'ny fotoana mety hiseho na fomba fijery samihafa amin'ny fiainana sendra anao.
3. Anontanio izay tsy ampy amin'ny fiainanao.
Miaraka amin'ny ho avy ao an-tsaina, tonga ny fotoana hijerena ny toe-javatra misy anao ankehitriny ary hizaha izay tsy anananao amin'izao fotoana izao.
Inona no tsy nahafa-po anao? Inona no nandiso fanantenana anao betsaka tamin'ny fiainanao tao anatin'izay taona vitsy lasa izay? Fa maninona no tsapanao fa tsy mandeha mankaiza ny fiainanao?
Leo fotsiny ve ianao amin'izany?
Sarotra aminao ve izany rehetra izany?
Niharatsy ve ny fifandraisanao tamin'ny hafa?
Tsy mahafaly anao intsony ve ny fialam-bolinao?
Ity fomba fiasa ity dia mety hahatsapa ho tsy dia tsara loatra, fa ny fandinihana ny toerana misy anao sy ny maha-ianao anao izao dia zava-dehibe raha te hanatsara ny toe-javatra misy anao ianao.
4. Mametraha tanjona sasantsasany.
Miaraka amin'ny sary mazava kokoa momba ny misy anao sy ny toerana tadiavinao, tonga ny fotoana hampiampitana io banga io.
Ary io tetezana io dia miorina manodidina ny tanjona.
Ny tanjona dia manampy anao hivoaka avy any A ka hatramin'ny B. Izy ireo no manome ny rafitra momba ny fanovana izay tianao hatao amin'ny fiainana.
Ka raiso tsara ny fiainana ho avy izay noeritreretinao mazava tamin'ny teboka faharoa ary avadiho ho tanjona lehibe sy maharitra izany.
Te hividy trano ao an-tanàna ianao. Tanjona izany.
Te hanana fifandraisana salama sy be fitiavana ianao. Tanjona izany.
Ny lafiny lehibe tsirairay amin'izany fiainana izany dia lasa tanjona maharitra.
ohatrinona ny tapakila wrestlemania 2017
Fa rehefa ny elanelana misy eo amin'ny misy anao izao sy izay tianao hahatongavana dia lehibe dia tsy azonao atao ny mitsambikina azy indray mandeha.
Eo no idiran'ny tanjona antonony sy ny tanjona fohy.
Hevero ho toy ny vato fiakarana tokony alehanao tsirairay ireo mandra-pahatonganao any amin'ny tanjona lehibe amin'ny faran'ny làlana.
Tianao io asa nofinofinao tianao io ary mandoa tsara? Mety mila mahazo mari-pahaizana fanampiny ianao, mahazo traikefa ampy, miasa asa marobe mifandraika amin'ny fotoana elaela hahazoana fahalalana tsara momba ny indostria. Mety mila mifindra any amin'ny toeran'ireo asa ireo aza ianao.
Te hividy trano ve ianao? Izany dia hiditra amin'ny fitehirizana vola tahiry izay mety hidika hoe miverina miverina miaraka amin'ny ray aman-dreninao mandritra ny fotoana fohy. Azonao atao ny manolo-tena hitahiry vola X isam-bolana izay mety misy sorona sasany amin'ny fiainanao ara-tsosialy sy ny fandaniana mifandraika amin'izany. Mety tsy maintsy manomboka amin'ny tohatra ambany sy mora kokoa amin'ny tohatra fonenana ianao alohan'ny hiakaranao mankany amin'ny toerana iray izay tadiavinao sy tianao.
Na inona na inona fahitanao azy amin'ny hoavinao, dia zarao ho kely kokoa, kely habe manaikitra izay azonao iasana tsikelikely.
Ny tanjona dia iray amin'ireo fanefitra lehibe amin'ny fiainana tsy mandeha mankaiza. Faritan'izy ireo ara-bakiteny ny fiainanao, na farafaharatsiny ny làlana antenainao haleha.
5. Mamelà fahazarana tsara izay manampy anao hanatratra ny tanjonao.
Na ny kely kokoa noho ny tanjona kely indrindra aza dia fahazarana. Ireo no zavatra ataonao isan'andro isan'andro, matetika nefa tsy fantanao akory.
Ary ny fanaovanao azy ireo matetika dia izay mahatonga azy ireo ho fitaovana matanjaka amin'ny fanatrarana ny tanjonao sy ny fanovana ny fiainanao. Io no vokatry ny fihetsika madinidinika be dia be izay mivadika vokatra lehibe toy izany.
Andao lazaina fa ny iray amin'ireo tanjonao lavitra dia ny hahavery 50lb satria fantatrao fa matavy loatra ianao ary maniry ny ho salama kokoa.
Andao izao holazaina fa ny iray amin'ny fahazarana anananao ankehitriny dia ny maka chips kely na sôkôla isaky ny mameno lasantsy ianao. Raha azonao ovaina io fahazarana io ka maka paoma, voasary na akondro ianao dia handray dingana kely mankany amin'ny tanjonao rehefa mandeha ny fotoana.
Raha ny hihaona amin'ny olona vaovao sy hahazo namana vaovao no tanjonao dia azonao atao ny mamboly fahazarana mahatadidy ny anaran'ny olona iray ary miarahaba azy ireo mampiasa izany. Amin'izay dia hieritreritra tsara kokoa momba anao izy ireo ary hitombo ny mety hahatonga azy ireo ho mpinamana.
Jereo ny fiainanao isan'andro ary fantaro ny fahazarana lehibe rehetra anananao. Avy eo jereo raha mila ampifanarahana na esorina ny iray amin'ireto mba hahazoanao miatrika vintana tsara kokoa hanatratra ireo tanjonao lehibe amin'ny fiainana.
Ny fametrahana ny fahazarana mety amin'ny toerany dia afaka manampy anao hampiorina sy hihazona ny hery satria vita tsy tapaka izany. Ka aza atao ambanin-javatra ny lanjan'izy ireo.
6. Mankasitraka ny zavatra tsara amin'ny fiainanao.
Na dia toa tsy mandeha mankaiza aza ny fiainanao dia tsy isalasalana fa hisy zavatra momba azy tianao.
Mety tsy dia ankasitrahanao tanteraka ireo zavatra ireo dieny izao, fa raha afaka mianatra mankasitraka azy ireo ianao dia hanampy anao hahatsapa ho tsara ny fiainanao izany.
Araka ny efa voalaza tetsy ambony, hisy fotoana maharitra izay tsy misy fiovana firy amin'ny fiainanao, ary na dia mampihetsi-po sy mamelombelona aza ny fiovana, dia zava-dehibe ny tsy jerena. ny zavatra tsotra eo amin'ny fiainana .
Misotro miaraka amin'ny namana, andro fitsangatsanganana an-trano ao amin'ny zoo, mankafy ny voninkazo lohataona ao an-jaridainanao, eny fa na dia ny fifaliana azo avy amin'ny famoahana andian-dahatsoratra ao amin'ny Netflix aza - azo antoka fa mety tsy mifanaraka amin'ny fotoana lehibe kokoa amin'ny fiainana izy ireo, saingy mbola maninona izy ireo.
Ny fankasitrahana tsy tapaka dia mitazona ny fahatsapana ny tsy fahampiana sy ny faniriana mafy. Raha tokony hahita ny zavatra rehetra tsy anananao sy ny fiainana tsy mandeha mankaiza ianao dia mahita ny zavatra mahafinaritra rehetra ataonao manana fiainana izay manatanteraka amin'ny fombany manokana.
Ka jereo tsara ary tsapao ary asehoy ny fankasitrahana amin'ny fotoana rehetra mety.
7. Miaina ny fiainana amin'izao fotoana izao.
Amin'izao fotoana ara-potoana izao dia mety ho voafetra hanana fiainana hafa ianao - fiainana iray izay manaitaitra sy mahafinaritra kokoa noho ilay itantananao izao.
Saingy io fanamafisana io dia midika fa tsy mandray feno ny zava-mitranga rehetra amin'izao fotoana izao ianao, manodidina anao.
Ity toe-tsaina sy fifantohana ity dia mangalatra ny fahaverezan'ny fotoana ankehitriny. Mampihena ny sainao izany ary mahatonga ny zava-drehetra ho somary tsy dia hahagaga sy kely kokoa… meh!
Ny marina dia, ny fiainana izay iainana amin'izao fotoana izao dia tsy mila mandeha mankaiza. Ampy izay.
Tsy manahy intsony ianao hoe inona no 'tokony' ataonao amin'ny fiainanao satria voafoninao tanteraka amin'ny fiainana izany.
Raha te hahalala ny fomba, jereo ny lahatsoratray amin'ity lohahevitra ity: Ahoana ny fomba hiainana amin'izao fotoana izao
8. Atsaharo ny fampitahanao ny fiainanao amin'ny fiainan'ny hafa.
Mety hahatsapa ianao fa mijanona eo ary tsy mandeha mankaiza ny fiainanao satria misy olona manodidina anao toa mandehandeha haingana be ny fiainany.
jenna marbra sy julien solomita
Mety mivady izy ireo, manomboka asa vaovao, mifindra trano, manambady, manan-janaka, na zavatra hafa tanteraka - rehefa tsy miova mihitsy ny fiainanao.
Mety hahatsapa ianao fa avela any aoriana.
Fa tsara ny mahatadidy fa ny fiovana lehibe dia eo anelanelan'ny vanim-potoana maharitra. Ka raha misy olona mandalo fisehoan-javatra manova fiainana maro dieny izao, dia misy ny mety hilamina ho azy ireo atsy ho atsy.
Ary satria efa milamina ny fiainanao izao, tsy midika izany fa tsy eo an-dàlana ny fanovana lehibe - indrindra fa nametraka tanjona mafy orina ianao.
Noho izany, azafady, ajanony ny fampitahana ny fiainanao amin'ny fiainan'ny hafa.
Tsy hazakazaka ny fiainana dia fitsangatsanganana. Ary ny dianao dia hitondra anao any amin'ny toerana samy hafa mankany amin'ny dian'ny namanao, ny iray tampo aminao, ny mpiara-miasa aminao ary ny olon-drehetra.
Mandeha haingana ireo dia ireo indraindray ary mandeha miadana indraindray, saingy tsy misy dikany ny hafainganana. Misy zavatra maika, fa ny ankamaroan'ny zavatra tsy, ary mbola betsaka no ankafizina amin'ny hafainganam-pandeha milamina kokoa ihany.
9. Atsaharo ny fanerena anao.
Mety hahatsapa ianao fa tsy mandeha mankaiza ny fiainanao satria mino ianao fa tokony hanana tanjona mazava sy mazava ny fahatsapana ny zavatra tokony hataonao sy ny fomba tokony hiainanao.
Ianao, toa ny olon-kafa maro, dia mety handany fotoana be loatra amin'ny fisainana inona no tanjon'ny fiainana .
Saingy ny olana lehibe amin'ity fikarohana tsy tapaka momba ny toro lalana ity dia ny fanerena anao.
Raha mino ianao fa ny fiainana dia manana teboka manokana amin'izany, dia tsy maintsy mahatsapa ianao fa tsy misy na inona na inona io fiainanao io.
Iza no milaza fa tsy maintsy tratranao ny X, Y, na Z raha misy dikany ny fiainanao?
Iza no milaza fa tokony ho olona iray ianao ary hiaina fomba iray?
Ny valiny: tsy misy.
Raha tsapanao fa toa mitovy ihany ny fiainanao ary tsy tena nantenanao, zavatra iray izany. Zavatra iray hafa tanteraka ny fananana fanantenana lehibe amin'ny fiainana miovaova rehetra feno singa mystika sasany antsoina hoe tanjona.
Araka ny hitantsika dia tsy izany no fiasan'ny fiainana.
Noho izany, manamaivana ny tenanao ary aza mijanona mitaky fiainana miaina mandrakizay izay manome fahafinaretana mandrakizay ary tsy manadino mihitsy.
10. Raiso ny andraikitrao amin'ny fiainanao.
Eo an-tampon'ny flipide ny tsy fanerena ny tenanao dia ny maha-zava-dehibe ny fandraisana andraikitra amin'ny fiainanao.
Na dia tsy afaka mifehy ny fiainanao manontolo aza ianao dia afaka mifehy be.
Voalohany indrindra dia manana fifehezana ny fihetsem-ponao ianao amin'ny toe-javatra hitanao fa ao anatin'izany ny fahatsapana fa tsy mandeha mankaiza ny fiainanao.
Fihetseham-po azo tsapain-tanana izany, ary ny teboka sasany amin'ity lahatsoratra ity dia tokony hanampy anao hanao izany.
Azonao atao ihany koa ny tompon'andraikitra amin'ny fiezahana hanatratra ireo tanjona noresahintsika teo aloha ireo.
Inona no ataonao rehefa leo
Zava-dehibe ny andraikitra ary manome hery. Rehefa tsapanao fa manana teny lehibe ianao amin'ny valin'ny toe-javatra iray sy amin'ny fiainanao midadasika dia azonao ny hery eo am-pelatananao.
Mety ho somary mampatahotra ihany izany amin'ny voalohany, fa manentana ihany koa satria tsapanao fa tsy mpandeha intsony ianao amin'ny fiainanao.
Ny andraikitra dia midika hoe miseho amin'ny fiainana sy maha mpilalao sarimihetsika ao anatiny fa tsy mpijery mijery lavitra fotsiny. Manana andraikitra ianao, manana ny filazanao, manana fitaomana manitatra mihoatra ny fehezinao ianao.
Tsy maninona ianao. Zava-dehibe ny fiainanao sy ny fomba itarihanao azy. Fantaro izany ary hahita fomba ianao hanovana ireo fiovana amin'ny fiainanao izay hitondra anao any amin'izay tianao haleha.
11. Miaraha miasa amin'ny mpanazatra fiainana.
Betsaka ny zavatra tokony hositranina amin'ity lahatsoratra ity sy ny dingana maro tsy maintsy raisina. Mety hahatsapa ho mampatahotra kely ny manomboka ny dia.
Fa tsy mila ataonao samirery. Azonao atao ny mieritreritra mpiara-miombon'antoka tompon'andraikitra amin'ny fandraisana andraikitra - namana na olona ao amin'ny fianakaviana izay manana tanjona kendren'izy ireo koa izay ahafahanareo mifanampy sy mifanosika raha toa ka manadino ny baolina ny iray na ianareo roa.
Raha tsy izany, azonao atao ny mijery mifandray amin'ny mpanazatra fiainana iray izay manana fahaizana sy traikefa hanampy anao hahita izay làlana tianao haleha ary hitarika anao amin'izany.
Hotazonin'izy ireo ianao ary homena anao antoka koa fa mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha mifanaraka aminao sy amin'ny lalana ahazoanao aina ianao.
Raha heverinao fa zavatra tianao tadiavina ity dia kitiho eto raha hahitana mpanazatra fiainana eo akaikinao, na iray izay afaka miasa miaraka aminao amin'ny fampiononana ao an-tranonao manokana.
Ahoana no hanan-tombom-bolo bebe kokoa amin'ny fiainana: toro-hevitra mahomby 9!
Ahoana ny fomba hametrahana fikasana isan'andro hanatsarana ny fiainanao: dingana 6 manakiana
Fomba lehibe 10 handresena amin'ny fiainana
wwe superstar hanozongozona ny 2019
fitiavana ve sa filan-dratsy
maninona no mankarary ny mitia
raiki-pitia amin'ny olona iray izay
ny fomba hahazoana ny fanajana indray ny bandy